डा. डीआर उपाध्यायको फेरि अर्को विश्वकिर्तमान - एल्बम - साप्ताहिक
पछिल्लो समय नेपाल सांगीतिक क्षेत्रमा गीतकार डिआर उपाध्यायको बेग्लै चर्चा परिचर्चा छ । उनी निरन्तर रुपमा गीत/संगीतमा त छन् नै, त्यो भन्दा पर उनी गीत/संगीतकै फरक बाटोमा हिडिरहेका छन् । उनले हिडेको त्यहि फरक बाटोले उनलाई फरक पहिचान दिएको छ ।
यस अघिनै गीत/संगीतका विविध विधामा विश्वकिर्तिमान कायम गर्न सफल उपाध्यायले यसै सता अन्य ८ विश्वकिर्तिमान कायम गरेका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजना गरिएको एक भव्य कार्यक्रममा एभरेष्ट वल्र्ड रेकर्डका फाउण्डर निर्देशक मधुरा श्रेष्ठले उनलाई ८ वल्र्ड रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
उनले कायम गरेको ८ वल्र्ड रेकर्डमा २४ फरक गीत १२ मेजर १२ माइनर स्केलमा एउटै एल्बममा, ५ फरक सङ्गीतकारले सङ्गीत गरेको एउटै गीत, अधिकांस हिन्दू देवी देवताको नाम राखेर बनाइएको गीत, एउटा एल्बममा सबै गीत सेभेन्थ कड्स, सबैलाई स्वस्थ राखौं भन्ने योग सम्बन्धी गीत, महिला प्रताडना सम्बन्धि गीत जसमा ७१ वर्ष र ५ वर्षकी गायिकाको स्वर, अत्यधिक हिमाललाई समेटेर पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गीत र १६ महिनामाा १८ एल्बम सार्वजनिक रहेका छन् ।
यसअघि डा. डीआर उपाध्यायले ६ वल्र्ड रकेड राखेका थिए । अहिले उनको जम्मा वल्र्ड रेकर्डको संख्या १४ पुगेको छ । विश्वकीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायले सोमबारनै विश्वकिर्तिमान राख्न सफल सम्पूर्ण एल्वम सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनका आठ उपन्यास एकै पुस्तकमा र नयाँ एक उपन्यास पनि सार्वजनिक भएको छ ।
सोही अवसरमा बाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई जन्मसताब्दी अभिनन्दन गरिएको थियो । दुबैजनालाई गीतकार उपाध्यायले ५१ हजार राशि सहितको उक्त अभिनन्दन गरेका हुन् । दुबै स्रष्टालाई एकै मञ्चमा सम्मान गर्ने उपाध्ययको रहर भए पनि राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे अस्वस्थताका कारण कार्यक्रममा उपस्थिति हुन सकेनन् । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई भने ५१ हजार नगद सहितको ‘शतबार्षीकी अभिनन्दन २०७६’ सम्मान घिमिरे निवासमै गएर गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शताब्दी पुरुष जोशीले डा. डीआरले नेपाली गीत सङ्गीतलाई विश्वमा चिनाउने महत्वपुर्ण काम गरेको बताए । उनले डीआरका कार्यको प्रसंसा गर्दै चर्चा योग्य काम गरेको बताए ।